Dhaca telefoonnada Kenya ee lacagta la iska shubanayo - BBC News Somali
Image caption Kenya waa dalka ugu badan ee laga isticmaalo lacagaha telefoonnada gacanta
Telefoonnada gacanta ee Kenya waa sidii xisaabaad banki - dadka qaar ayaa lacagahooda ku haysta telefoonka - tuugadana waxay isku dayaan inay jabsadaan si ay u xadaan.
Sammy Wainaina Axaddii waxaa u soo dhacay Farriin-qoraaleed lagu weydiisanayo lambar sir ah, si ikaarkiisa loo beddesho.
Wuu ku wareeray, waayo ma uusan codsan kaar cusub, goor markaa ka sii horraysana wuxuu jaray telefoon soo wacay oo uu fahmay inuu ahaa tuug isu ekeysiiyey inuu ka soo wacayey xarunta shirkadda telefoonka.
"Wuxuu ahaa wicitaan gaaban, mana aanan bixin macluumaadkayga" ayuu ku yiri Wainaina BBC.
Isla markiiba wuxuu wacay shirkadda Safaricom oo ah shirkadda uu telefoonkeeda isticmaalayey, si uu ugu sheego inuu ka shakiyey tuugo soo wacday oo doonaysay inay lambarkiisa dhacaan.
Inkastoo uusan macluumaad bixin, shirkaddana uu u sheegay wixii uu la kulmay, misna wuu isticmaali waayey lambarkiisa. Seddex maalmood ka dib ayey u suurtogashay inuu isticmaalo.
Twitterka ayuu soo dhigay wixii uu la kulmay
Xuquuqda Sawirka @sammy_ynwa @sammy_ynwa
Mr Wainana wuxuu sheegay in Safaricom ay la soo xiriirtay ka dib markii uu cabasho u gudbiyey oo ay siiyeen kaar cusub, ayna u digeen. Laakin dadka oo dhan sidaa uma wada nasiib badna.
Israa'iil oo askarteeda uga digtay "basaasidda" Xamaas
Waxaan waayey $18,000 oo Doollar
Sheekadiisa waxay dhalisay in qaar kale ay la wadaagaan dadweynaha wixii soo maray, kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah lacago laga dhacay.
Xuquuqda Sawirka @DCI_Kenya @DCI_Kenya
Siyaasiga Stanley Wanjiku wuxuu shaaca ka qaaday in uu ku dhacay shirqoolka tuugada oo uu ku waayey $18,000.
Wuxuu u sheegay wargayska the daily Nation in dhibaatadu ku bilaabatay markii ay u soo dhacday farriin ah inuusan isticmaali karin lacagta ku jirta telefoonkiisa, ayna tahay inuu Waco lambar la siiyey oo loo sheegay inuu garaaco si loogu hagaajiyo, isaguna sidii ayuu yeelay.
Goor dambe wuxuu ogaaday in lambarkiisa sirta ah (PIN) la beddeshay oo mid cusub la samaystay, sidaa darteedna uusan lacagtiisa la bixi karin.
"Ma garanayo sida lambar sireedkeyga lacagta telefoonka dib loogu samaystay oo loo siiyey dad aan aniga ahayn. Iminka khasaare ayaan ku jiraa" ayuu yiri Mr Wanjiku oo oo telefoonkiisu uusan ku xirnayn xisaabtiisa bankiga, taasoo iyadana la jabsaday.
Dadka qaar waxay haystaan dhowr kaar oo shirkado kala duwan leeyihiin, ayagoo xiriirro la leh dad isticmaala adeegyada shirkadahaas. Taa micnaheedu waa in kaararka ay wax soo gaari karaan oo qofku dalban karo in loo beddelo.
Kenya waxay leedahay dadka ugu badan dunida ee isticmaala lacagaha loo adeegsado telefoonka gacanta, waana sababta ugu weyn ee xatooyada kaararka telefoonnada (Sim Cards) ay dadweynuhu uga qaylo dhaamiyeen.
Badi 47ka malyan ee qof ee dalka u dhashay, kala bar ku dhawaad waxay isticmaalaan nidaamka lacagaha telefoonka ee M-Pesa, waxayna ku bixiyaan adeegyada iyo ganacsiga.
Ayadoo siyaabo kale la isu kaashanayo, shirkadaha telefoonnada waxay lacagaha telefoonnada kala shaqeeyaan baananka, sidii dadka xisaabaadka ku leh ay lacagahooda ama ugu shuban lahaayeen, ama ugala bixi lahaayeen.
William Makatiani oo ka tirsan hay'adda dadka kala Talisa amniga xagga isticmaalka internetka ee Serianu, wuxuu sheegay in dhaca noocan ah uu soo badanayo.
"Kaararka la beddelanayo waa dhibaato weyn, gaar ahaan Nigeria, tan iyo 2016. Hadda waxay ku bilaabatay Kenya, gaar ahaan wixii ka dambeeyey nuskii dambe ee sannadkii hore" ayuu yiri.
Sidee isku ilaalin kartaa?
Marnaba ha bixinin macluumaadkaaga gaarka ah.
Ha bixinin lambarkaaga gaarka ah (PIN).
Tirtir codsiyada akhbaartaada lacageed ama lambar sireedyadaada (Passwords).
Ka digtoonow farriimaha aan la aqoon cid soo dirtay.
Shirkadda Safaricom waxay macaamiisheeda ka codsatay inay ilaashadaan lambar-sireedyadooda, taariikhda dhalashada, iyo lambarka aqoonsiga.
Waxay kaloo macaamiisha uga digeen inay ogsoonaadaan lambarka adeegga macaamiisha, si aan loo khiyaanin dadka la doonayo in la dhaco.
Telefoon iyo mobileka caaqilka ah